Ụbọchị My Pet » 7 Jọrọ njọ Mejọọ Women Mee-emebi ọ bụla Ohere nke a Mmekọrịta
Ọ dịghị onye zuru okè. N'ezie, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-abụ ihe ezi dị ka ukwuu fun ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ. Otú ọ dị, e nwere ụzọ nke pụrụ ibibi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ. The n'okpuru Atụmatụ ndị jọrọ njọ emehie na ndị inyom na-ekwesịghị ime mgbe akpa.
-Emebiga E Nwere
Wetere ọtụtụ ndị na kọntaktị na ntabi-anabatakwa ihe ọ bụla akwụkwọ ozi si ya niile bụ ihe ịrịba ama na-ekwu na ị bụ kwa dị. Men anya n'ihi na obi ike na onwe ha ndị inyom bụ ndị na-chọrọ ndị ọzọ. Mgbe ị pụrụ ịchọ ịkọrọ ma ọ chọrọ igosi mmasị gị Ihọd, ndidi kwa dị ga-abịa gafee olileanya.
Nwoke ọ bula chọrọ otu nọọrọ onwe ha nwaanyị nri?! Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị bụ kwa “in-na-” onwe gị, ndị ikom ga--agbanyụrịrị. Ọ dị mkpa na-eji oge ekwu okwu banyere gị na ụbọchị na ahụmahụ o na ọdịmma nakwa dị ka na-ekere òkè gị.
Mgbe niile N'ịbụ On Your Phone
Ị bụ na a ụbọchị ga-esi mara gị nwere Mr. Right na Anglịkan. Mgbe niile ịbụ na ekwentị gị na-akparị mmadụ dị ka mmadụ chọghị-akpa na ekwentị gị, ọ chọrọ ga-esi mara gị. Jide n'aka na ekwentị gị abụghị nanị na gị akpa maka dum ụbọchị ma na-ahụ na ọ bụ ihe na nkịtị.
Times na-agbanwe agbanwe na kwe nkwa ịkwụ ụgwọ na mbụ ụbọchị na-aghọ a chọrọ. Mgbe a njuaka ndị ikom ga-esi ọnwụ na-akwụ ụgwọ, ọtụtụ ndị ga-mbà ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-enye aka dịkarịa ala kewaa ụgwọ.
Aṅụ oké mmanya
Mgbe na-enwe ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ abụọ na a ụbọchị bụ n'ụzọ zuru okè ezi, -aṅụ ya ókè ma ọ bụ ọbụna na-mmanya na-egbu on a ụbọchị ga-enwe ya na-agba ọsọ maka ndụ ya. Ọ bụghị nanị na nke a na-egosi na ị dịghị njikere maka a siri mmekọrịta akwụsị ịṅụ oké mmanya na-eduga nwere ikwu ihe i nwere ike na-ewute.
Agbalị Gbanwee Ya
Ịkụ nzọ-n'anya-gi ndụ on a Ihọd nwere ikike nke bụ a uzommeputa n'ihi ọdachi. Mkpapụ nanị n'ihi na ọ bụ mara mma ma ọ bụ nwere ego mgbe na-agbalị ịgbanwe ya ịghọ gị zuru okè Ihọd ga-atụgharị ihe ọ bụla mmekọrịta n'ime otu jupụtara iwe na iwe.
Ndị ikom na-kpam kpam agbanyụrụ site inyom na-atụgharị mbụ ụbọchị n'ime ntabi you're-na-otu-let's-ina-alụrụ. Ọ dịghị mma mmetụta mgbe ahụ na-enwe a magburu onwe mbụ ụbọchị ma ladies, na- “A hụrụ m gị n'anya” echiche na-onwe gị na nke mbụ ọnwa ole na ole. Na-oké njọ na-ekwupụta mmetụta ndị ahụ kwa anya ga-eme ka gị na nwoke na-agba ọsọ.